जब इन्स्टाग्रामले तपाइँलाई प्रयोगकर्ता नभएको बताउँदछ ▷ ➡️ अनुयायीहरू ▷ ➡️
जुलाई 12, 20190टिप्पणी 8466
वास्तवमै के हुँदैछ जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन? पक्कै यो तपाईंलाई भयो कि तपाईं एक साथीको प्रोफाइल मा जानुहुन्छ इन्स्टाग्राम र त्यो कष्टकर सन्देश तपाइँलाई देखा पर्दछ; त्यहाँ यस्तो धेरै कारणहरू छन्। यहाँ यस लेखमा हामी सम्भावित कारणहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन.
यो सन्देश सामान्यतया देखा पर्दछ जब एक व्यक्तिले तपाइँलाई सामाजिक नेटवर्कबाट रोकेको छ। पनि जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन यो किनभने एक पटक तपाईंलाई ब्लक गरिएको छ, सामाजिक नेटवर्कले तपाईंलाई सुविधाहरू प्रयोगबाट हटाउँछ, यस मामलामा हेर्नुहोस् वा तपाईंलाई ब्लक गर्ने व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कहिले प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
अहिले, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन तपाईंले फेला पार्नु पर्छ र जाँच गर्नुपर्नेछ यदि तिनीहरूले वास्तवमै तपाईंलाई ब्लक गरेको छ वा अरू कुनै असुविधा भएको छ। प्रमाणित गर्ने सब भन्दा साधारण तरीका मध्ये एक इनकग्निटो मोडमा ब्राउजरमा जानुहोस् र खोजी पट्टीमा टाइप गर्नुहोस् इन्टरग्राम यूआरएलमा तपाईंले खोजी गर्न चाहेको व्यक्तिको प्रोफाइल नाम थप्दै।
यदि प्रोफाईल तपाईंलाई सामान्य तरीकाले देखा पर्दछ, तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता प्रविष्ट नगरीकन, यसको मतलब यो हो कि उनीहरूले तपाईंलाई निश्चित रूपमा ब्लक गरेका छन्। अर्कोतर्फ, यदि यसले तपाईंलाई उही सन्देश देखाउँदै रहन्छ जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन यसको मतलब यो हो कि व्यक्तिले आफ्नो नेटवर्कलाई सामाजिक नेटवर्कबाट मेटायो वा निष्क्रिय गर्‍यो।
अन्य अवसरहरूमा, यो हुन्छ कि तपाईंले एक प्रयोगकर्तालाई रोक्नुभयो, र यसलाई अनलक गर्दा पनि उही “प्रयोगकर्ता भेटिएन” सन्देश अझै देखिन्छ; यो हुन्छ जब प्रोफाईल ब्लग गरिएको छ लामो इंस्टाग्राम प्लेटफर्ममा। यदि यो मामला हो भने हामी यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर वर्णन गर्दछौं।
एक प्रयोगकर्ता अनलक गर्न कदम
प्रोफाइल आइकन फेला पार्नुहोस् र तपाईंको खाता पहुँच गर्नुहोस्।
त्यसपछि माथी दायाँ कुनामा अवस्थित सेटिंग्स आइकन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
एक पटक विकल्पहरू प्रदर्शित भएपछि, "सेटिंग्स" भन्नुहुने एउटालाई चयन गर्नुहोस्।
त्यस पछि, "गोपनीयता र सुरक्षा" विकल्प चयन गर्नुहोस्।
एक पटक यो काम सकिएपछि, "लक गरिएको खाताहरू" को सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यहाँ तपाईले सबै व्यक्तिहरूको एक सूची देखाइने छ जुन तपाईले सामाजिक नेटवर्कमा अवरूद्ध गर्नुभयो। तपाईंले अनलक गर्न चाहानु भएको एकलाई चयन गर्नुहोस्।
अन्त्यमा, तपाईंले तल पट्टि देखा पर्ने पट्टी चयन गर्नुपर्नेछ, र "अनलक" मा क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक यी सबै चरणहरू सकिसकेपछि, तपाईं अनलक भएको प्रोफाइल खातामा जान सक्नुहुनेछ र जाँच गर्नुहोस् कि "प्रयोगकर्ता फेला परेन" सन्देश अब देखा पर्दैन। यदि हो भने, यो किनभने तपाईंले सफलतापूर्वक प्रयोगकर्तालाई अनलक गर्नुभयो र तिनीहरू दुबै अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्।
कसरी प्रयोगकर्ता अनलक गर्ने जसले मलाई इन्स्टाग्राममा लक गरेका छन्?
इन्स्टाग्राममा धेरै प्रयोगकर्ताहरू आश्चर्यचकित छन् कि यो सम्भव छ भने, र वास्तवमै होईन। त्यहाँ अझै कुनै विधि छैन जुन तपाईंलाई यो कार्य गर्नको लागि अनुमति दिन्छ। यदि एक प्रयोगकर्ताले तपाइँलाई अवरुद्ध गरेको छ भने पछाडि फर्कने छैन, जब सम्म कि व्यक्तिले तपाईंलाई कुनै बिन्दुमा अनलक गर्ने निर्णय गर्दैन। यदि तपाईसंग मतभेद भएको छ भने तपाईको व्यक्तिगत कुराकानीमा ध्यान दिनु उत्तम हुन्छ र सामाजिक नेटवर्क बाहिरको अवस्था सुल्झाउनु उत्तम हुन्छ।
अहिले, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन त्यहाँ यस्तो सम्भावना पनि छ कि यो तपाईंले नै ब्लक बनाउनु भयो। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं माथि वर्णन गरिएको चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्। यस तरिकाले, तपाईं अन्य व्यक्तिसँग फेरि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ र यसको विपरित।
एउटा इंस्टाग्राम प्रयोगकर्ता अनलक गर्दा त्रुटि
इन्स्टाग्राममा सब भन्दा सामान्य घटनाहरू ब्यक्तिहरू अवरोध भएका मानिसहरूलाई फेला पार्दैछ किनकि उनीहरूसँग व्यक्तिगत भिन्नताहरू थिए। अब, एक पटक स्थिति सकियो, तिनीहरू प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा अनलक गर्न जान्छन्, तर तिनीहरूले सन्देशको रूपमा समस्या फेला पार्दछन्। जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन त्यो व्यक्तिको प्रोफाइलमा, तपाईंले यसलाई अनलक गर्नको लागि अर्को विधिमा रिसोर्ट गर्नुपर्दछ; हामीले माथि वर्णन गरेका चरणहरूमा जानुहोस्।
अर्को कारण, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन त्यो अर्को व्यक्तिले तपाईंलाई ब्लक पनि गर्यो। यस अवस्थामा, जब दुबै प्रोफाइलहरू ब्लक गरिएको छ, न त अन्य द्वारा गरिएका गतिविधिहरू हेर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ कि अर्को प्रयोगकर्ताले मलाई एकै पटक ब्लक गर्यो? सत्य यो हो कि यो कठिन छ, तर प्राप्त गर्न असम्भव छैन।
जहाँसम्म, स्थिर प्रगति र इन्स्टाग्रामको अपडेटहरू एक कार्य हो जुन गर्न सकिन्छ। यो असंख्य विस्तारहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरूको कारणले हो कि तपाईंलाई एक व्यक्ति ब्लक गर्न अनुमति दिनुहोस् जसले तपाईंलाई पहिले ब्लक गरेको छ। त्यसकारण धेरै पटक जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन र तपाईंले पहिले नै प्रयोगकर्तालाई अनलक गर्नुभयो, यो किनभने उसले तपाईंलाई ब्लक गर्यो।
यद्यपि यो अनुप्रयोग त्रुटिहरूको कारणले हुन सक्छ; यो केही घण्टा टिक्न सक्छ। यदि यो जारी रहन्छ भने हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं अनइन्स्टल गर्नुहोस् र फेरि अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्, यस तरीकाले यो अपडेट हुनेछ।
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कहिले प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ?: म्युचुअल ब्लकि।
हामीले अघि उल्लेख गर्यौं, जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भन्छ प्रयोगकर्ता पाउन सकेन, वा जब तपाइँ एक व्यक्ति लाई रोक्नुहुन्छ र ऊ / उनी तपाइँको ब्लक गरिएको सूचीबाट गायब हुन्छ, सम्भवतः ती व्यक्तिले उसको खाता हटाएको छ, यसलाई निस्क्रिय बनाएको छ वा तपाइँले माथि उल्लेख गरेका अनुप्रयोगहरू वा बिस्तारहरूको लागि तपाइँलाई धन्यबाद गरिएको छ।
यदि तपाईं यो प्रमाणित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं साथी फेला पार्न सक्नुहुनेछ जसले उही व्यक्तिलाई पछ्याउँदछ र जाँच गर्न सकिन्छ कि यदि उसले आफ्नो खाता हटाएको छ भने। अर्को विकल्प यो छ कि तपाइँ ब्राउजरमा जानुहोस् र इन्कग्निटो मोड खोजी व्यक्तिको प्रोफाईल खोजी गर्नुहोस् जुन तपाइँको व्यक्तिगत इन्स्टाग्राम खाता प्रविष्ट नगरीकन हो।
अर्को सम्भावना यो हो कि अनुप्रयोगहरू र विस्तारहरूका लागि धन्यबाद जुन हामीले अघि उल्लेख गर्यौं, प्रयोगकर्ताले बुझे कि तपाईंले यसलाई रोक्नुभयो, र यसैले यसले तपाईंलाई पनि रोकेको छ। यो हुनु पर्ने कुरा होईन, तर सामाजिक नेटवर्कको दुनिया धेरै उत्सुकताहरूले भरिएको छ।
यदि तपाईंले एक व्यक्तिलाई अनलक गर्नु भएको छ र बुझ्नु भयो कि उक्त व्यक्तिले तपाईंलाई ब्लक गरेको थियो भने, त्यहाँ समाधानहरू छन् जुन यी परिस्थितिहरूमा उपयोगी हुन सक्छ। अर्को, हामी यसको बारेमा थोरै कुरा गर्नेछौं।
सबैभन्दा पहिले तपाईंले लागू गर्न सक्नुहुने एउटा तस्बिर हेर्नु हो जहाँ त्यो व्यक्ति ट्याग गरिएको छ र प्रोफाइल प्रविष्ट गर्न को लागी प्रयास गर्नु हो। सुरुमा, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई "प्रयोगकर्ता फेला परेन" सन्देश दिन सक्छ, हार नमान्नुहोस्। प्रयास गर्नुहोस् जारी गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं तीन पोइन्टहरू देख्नुहुन्न जसले प्रोफाइलको माथिल्लो दाहिने कुनामा सेटि inहरू स .्केत गर्दछ। एक पटक यो देखा पर्‍यो, तपाईं यसलाई चयन गर्नुहोस्, तपाईं विकल्प खोज्नुहुन्छ “अनलक”, र भोईला! तपाई त्यो व्यक्तिको प्रकाशन फेरि देख्न सक्नुहुनेछ।
यदि यसले तपाईंको लागि काम गर्दैन भने, अर्को समाधान पनि छ। कम्प्युटरबाट प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, यसको लागि तपाईंले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। एकचोटि यो काम सकिएपछि, प्रोफाइल पत्ता लगाउन र अनलक गर्न माथि वर्णन गरिएको सबै चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
व्यक्तिगत इन्स्टाग्राम खाता रोकियो: के गर्ने?
यदि तपाईंले यहाँ पाउनुभयो भने यो यो हो कि तपाईं सम्भवतः इन्स्टाग्रामको शिकार हुनुभएको छ र कुनै खाता स्पष्ट कारण बिना यसको खाता लकआउट। यसैले यस लेखको माध्यमबाट हामी मुख्य समाधानहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खातामा पहुँच अनलक गर्न लागू गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यो विचार गर्नु महत्वपूर्ण छ कि यी समाधानहरू केवल खाताहरूमा लागू हुन्छन् जुन ईस्टाग्राम निष्क्रिय वा अक्षम पारियो। यदि, अर्कोतर्फ, इन्स्टाग्रामले तपाईंको खाता हटाएको छ भने, यी सुझावहरू लागू गर्न सकिँदैन। यदि यो तपाईंको मामला हो भने हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं नयाँ इन्स्टाग्राम खाता बनाउनुहोस्।
यदि इन्स्टाग्रामले तपाईंको खाता ब्लक वा असक्षम गर्‍यो भनेर जान्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यो हो कि तपाईं लग ईन गर्दा निम्न सन्देश देखिन्छ: "तपाईंको खाता निष्क्रिय गरिएको छ।" यसको मतलब यो छ कि तपाईंको खाता अझै सक्रिय छ, तर तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। सामान्यतया, यो तब हुन्छ जब तपाईं प्लेटफर्मको नीति वा प्रयोगका सर्तहरू उल्ल .्घन गर्नुहुन्छ।
प्रमाणित गर्न यदि तपाईंको खाता वास्तवमा लक गरिएको छ र मेटिएको छैन भने, हामी तपाईंलाई अर्को फोनबाट लग इन गर्न सिफारिस गर्दछौं। यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइल पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, यो राम्रो खबर हो, किनकि यो मेटिएको छैन। यस अवस्थामा, इन्स्टाग्रामले फोनबाट तपाईंको खातामा पहुँच रोकेको छ जहाँ तपाईंले सिर्जना गर्नु भएको छ।
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ: कसरी जान्ने यदि तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा ब्लक गरिएको छ?
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई एक प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ: तपाईंको खाताबाट पहुँच पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्!
सामान्यतया, जब इन्स्टाग्रामले खाता ब्लक गर्छ, प्लेटफर्मले के गर्छ तपाईंको आईडी वा तपाईंको विशिष्ट गुगल खाता रोकिन्छ। घटनामा जब तपाईं एन्ड्रोइड फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंले के गर्नुपर्दछ नयाँ गुगल खाता सिर्जना गर्नुहोस्। अर्को, हामी तपाईले अनुसरण गर्नु पर्ने चरणहरूको वर्णन गर्नेछौं:
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगको स्थापना हटाउनु हो।
एक चोटि यो काम सकिसकेपछि तपाईंको पूरा फोनको ब्याकअप बनाउनुहोस्।
तपाईंको फोनलाई यसको मूल कारखाना राज्यमा पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको डाटाको पूर्ण ब्याकअप छ, किनकि तिनीहरू स्वत: मेटिने छन्।
नयाँ गुगल खाता बनाउनुहोस्।
तपाईंको फोनमा नयाँ खाता लिंक गर्नुहोस्।
अन्तमा, इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग फेरि डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्।
1 इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कहिले प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
1.1 एक प्रयोगकर्ता अनलक गर्न कदम
2 कसरी प्रयोगकर्ता अनलक गर्ने जसले मलाई इन्स्टाग्राममा लक गरेका छन्?
2.1 एउटा इंस्टाग्राम प्रयोगकर्ता अनलक गर्दा त्रुटि
3 इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कहिले प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ?: म्युचुअल ब्लकि।
3.1 सम्भावित समाधानहरू
4 व्यक्तिगत इन्स्टाग्राम खाता रोकियो: के गर्ने?
4.1 जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई एक प्रयोगकर्ता नभएको बताउँछ: तपाईंको खाताबाट पहुँच पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्!
जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ
Instagram के हो?